warkii.com » XOG: Lafta-gareen & Waare oo bedelay Go&rsquo;aankooda doorashada ee 2020/21 kana baxay&hellip;
XOG: Lafta-gareen & Waare oo bedelay Go&rsquo;aankooda doorashada ee 2020/21 kana baxay&hellip;
Madaxweynayaasha Galmudug, K/galbeed iyo Hirshabeelle ayaa si aad ah u taageersan Villa Soomaaliya ka dib markii dhaqaale fara badan oo laga saaray khasnada Dowladda ay madaxdaas ku soo baxeen.
Balse warar maalmihii u dambeeyay soo baxaay ayaa muujinayay in madaxda maamul goboleedyada ay midoobanayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen Qorshaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo guddoonka Golaha Shacabka.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa loo madlan yahay,waxaana 9-ka bishan ka furmaya shirka maamul goboleedyada,kaas oo lagu iclaamiyay kulanka Khadka Internetka ee ZOOM-ka iyo Whatsapp-ka ku dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Maamul Goboleedyada 22-kii June, kaasoo saaxiibadii ugu dhowaa Madaxweynaha sida Madaxweynaha K/Galbeed C/casiis Lafta-gareen uu si weyn uga hor yimid waxa ka socda Baarlamaanka Federaalka ee ansixinta xeerarka Doorashada.
Kulanka 22-ka June ayaa ahaa mid uu madaxweyne Farmaajo uga hortegay War-saxaafadeed ay soo saari lahaayeen madaxda maamul Goboleedyada oo xilligaasi ay shirar hoose ka yeesheen xaaladda Doorashada dalka, isagoo si degdeg u qabanqaabiyay kulanka uu la yeelanayo madaxda Maamul Goboleedyada.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si cad uga hor yimid Madaxtooyada Soomaaliya ee Doorashada markii uu taageeray baaqii Guddoomiyaha Aqalka Sare, waana madaxweynaha saddexaad ee ugu fog marka lagu daro Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland; wuxuuna dagaal qaraar oo siyaasadeed kala dhaxeeyaa Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh.
Madaxweynaha Galmudug oo qaatay tallaabo aanu si cad ugu muujin mowqifkiisa ayaa isna dhinac maray Madaxtooyada, wuxuuna qeyb weyn ka yahay qabanqaabada shirarka madaxweynayaasha maamul Goboleedyada ee lagu doonayo in mowqif mideysan looga qaato Doorashada la isku khilaafsan yahay.
Villa Soomaaliya ayaa saaxiibo muhiim ah ku weysay hanaanka doorasho ay soo bandhigtay iyo waliba qorshaha ku aadan 2020/21,waxaana arrintaas laga cabsi qabaa in dalka ay geliso khatar siyaasadeed.